Madheshvani : The voice of Madhesh - आत्मसमर्पण गरेर सभामुख पद लिन्नौं : कृष्णा सिंह
आत्मसमर्पण गरेर सभामुख पद लिन्नौं : कृष्णा सिंह
० राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले आफैले तोकेको मितिमा महाधिवेशन गर्न सकेन । अध्यक्षमण्डलका संयोजक मात्र परिवर्तन हुँदै आएको नि ?
— महाधिवेशनका धेरै कुराहरू अहिले अगाडि बढिसकेका छन् । जिल्लाहरूमा कमिटीहरू गठन भइसकेका छन्, केही ठाउँहरूमा अलिकति विवादहरू छन् त्यहाँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले अगाडि बढाउँछौं । हामीलाई के लागेको थियो भने महन्थ ठाकुरकै नेतृत्वमा महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ । तर, संयोजक पुनः परिवर्तनले हामी आश्चर्यमा परेका छौं । हुनसक्छ केही कारणले गर्दा ठाकुरजीले राजेन्द्र महतोजीलाई संयोजक हस्तान्तरण गर्नुभएको होला । तर, महाधिवेशनका लागि राजपा अहिले एकढिक्का भएर अगाडि बढिरहेको छ ।
० तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन किन हुन सकेन त ?
— निश्चितरूपमा तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुनसकेन । यसका विभिन्न पक्षहरू छन् । अध्यक्षमण्डलकै नेताहरूबीच समझदारी नबनेर समयमै महाधिवेशन हुन नसकेको हामीले बुझेका छौं । राजपा अहिले बन्ने क्रममै छ । सायद अध्यक्षमण्डलका नेताहरूमा महाधिवेशन गर्ने इच्छाशक्ति नभएकोले हुन सकेन । तर, अहिले आएर नेताहरूबीच समझदारी बनेको स्थिति छ । यो एउटा सुखद् पक्ष हो । त्यसैले, राजपा अब बल्ल बन्ने क्रममा छ ।
० जिल्लास्तरमा भन्ने हो भने अध्यक्षमण्डलकै क्षेत्रमा बढी विवाद देखिएको छ नि ?
— वास्तवमै भन्ने हो भने अध्यक्षमण्डलमै समस्या छ । पार्टीका अध्यक्षमण्डलहरूमा समस्या छैन । निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षमण्डललाई नै छ । उहाँहरूले आआफ्नो हिसावले पर्यवेक्षक चुन्नुहुन्छ, आफ्नो हिसावको हिस्सा पनि लिनुहुन्छ र सबभन्दा बढी विवाद उहाँहरूकै क्षेत्रमा हुन्छ । द्वन्द्व यहींनेर देखिन्छ । एकअर्काप्रति शंकाउपशंका गर्ने, अर्काको क्षेत्रमा गएर द्वन्द्व उत्पादन गराउने वातावरण देखियो । अध्यक्षमण्डलका नेताहरूकै क्षेत्रमा विवाद हुनु दुर्भाग्यको कुरा हो । शीर्ष नेतृत्वहरूमा दम्भ र अहंकार देखिएको छ तर, उहाँहरूको पक्षमा आम नेता कार्यकर्ता छैन ।
० तदर्थ समिति गठनसम्बन्धी निर्देशिका जारी भएको थियो तर, त्यो समयमा कार्य सम्पन्न भएन । पुनः २० दिन थपिएको छ । यो अवधिमा महाधिवेशनको तयारी पूरा हुन्छ त ?
— थप भएको समयमा पर्यवेक्षकहरूले आफ्नो सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ र त्यसलगत्तै महाधिवेशनको मिति घोषणा हुनुपर्दछ । यो २० दिन पर्याप्त छ । जहाँ सहमति हुँदैन त्यहाँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार चुनाव गराएर भएपनि कमिटी चयनको काम सम्पन्न गराउनुपर्छ ।
० यही वर्षभित्र महाधिवेशन हुन्छ कि अर्को वर्ष ?
— थप भएकोे समयमा पर्यवेक्षकहरूले आफ्नो कार्य सम्पन्न ग¥यो भने यही वर्षभित्र हुन्छ । किनभने महाधिवेशनका धेरै कुराहरू भइसकेका छन् । पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई महाधिवेशन गर्ने इच्छा छ भने यही महिनाभित्र भइहाल्छ । किनभने पूर्वतयारी बिना महाधिवेशन सम्भव छैन । पार्टीलाई एकढिक्का, मजबुत र जिवन्तता दिनका लागि महाधिवेशन अति आवश्यक छ ।
० अध्यक्षमण्डलका नेताहरू आफू दुई–दुई महिना संयोजक भइरहने लोभ गर्दा पनि महाधिवेशनलाई त्यति प्राथमिकता नदिएको हो कि ?
— अध्यक्षमण्डलीय पद्धतिले गर्दा पनि महाधिवेशनलाई धेरै प्रभाव पारिरहेको छ । सबै जनाले अध्यक्षमण्डलको संयोजक भइसक्नुभयो तर, पार्टीलाई उहाँहरूले जीवन्तता दिन सक्नुभएको छैन । आम नेता कार्यकर्र्ताले एक जना कसैलाई संयोजक वा अध्यक्ष बनाएर हिंडौं भन्ने चाहन्छन् । कुनै एक जना नेतालाई नेतृत्व दिएर महाधिवेशन गरौं र त्यसबाट जो आउनुहुन्छ उहाँलाई स्वीकार गर्छौं भन्ने चाहना छ । तर, उहाँहरू आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हान्ने काम गरिरहनुभएको छ । चक्रीय प्रणाली हामीलाई कहिल्यै पनि स्वीकार छैन । तापनि अध्यक्षमण्डलका नेताहरूको जुन बाध्यात्मक स्थिति छ त्यसलाई स्वीकार गरिरहेका छौं । तर यो चक्रीय प्रणालीले राजपालाई राम्रो गरिरहेको छैन ।
० उपनिर्वाचनमा राजपाको तयारी कस्तो छ ?
— यो उपनिर्वाचनमा राजपाको राम्रै अवस्था छ । तर, अहिले पार्टी एकढिक्का नभइसक्दा जुन द्वन्द्वहरू देखिएका छन्, यसले अवश्य नै हामीलाई असर गर्छ । यी कुराहरूलाई यथाशीघ्र समाप्त गर्दा मात्र नेताजीहरू र पार्टीको लागि राम्रो हुन्छ । जसरी कांग्रेसले कांग्रेसलाई हरायो, त्यसरी नै राजपाले राजपालाई नै हराउने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले, अहिले हामी एकढिक्का भएर हिंड्नुपर्छ ।
० राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकताको चर्चा लामो समयदेखि चलिरहेको छ, एकता प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो ?
— यसको जवाफ त हाम्रो संयोजक राजेन्द्र महतोले नै दिनुहुन्छ, किनकि उहाँ वार्ता समितिका पनि संयोजक हुनुहुन्छ । तर, हामी पहिला राजपा बनाऔं, त्यसपछि एकतामा जाऔं भन्दैछौं । हामी एकताका विरोधी होइनौं, तर पहिला राजपा बनाउनुप¥यो । हाम्रो आफ्नै बीचमा समझदारी बनेको छैन भने अन्य पार्टीसँग कसरी समझदारी हुनसक्छ । हाम्रो पार्टीमा धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई उचित समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उपेन्द्र यादवजीसँग धेरै पहिलादेखि एकताको कुरा चलिरहेको छ, यो एउटा प्रक्रिया हो । तर, कमसेकम हामी पहिला पार्टीलाई सुदृढ बनाऔं, एकता त भोली समयमा हुनसक्छ । एकीकरणको कुरा त चलिरहेको छ तर, कस्तो एकीकरण ? समर्पण कि एकीकरण ? त्यसैले यी कुराहरू बुझेर नै हामी आत्मसमर्पण गर्ने पक्षमा छैनौं । राजपाको आफ्नो जुन एउटा स्पष्ट धार छ, त्यसलाई तोडमोर गरेर सिधै मिलिहाल्ने अवस्थामा राजपाका नेताहरू छैनन् । त्यसैले, जबसम्म यी कुराहरू अध्यक्षमण्डलले मिलाउन सक्नुहुन्छ तबसम्म एकीकरण सम्भव छैन ।
० तपाइँहरू के चाहनुहुन्छ ?
— नेतृत्व व्यवस्थापनदेखि मुद्दामा जबसम्म सबै कुरा मिल्दैन एकीकरण कसरी सम्भव हुन्छ ? एकीकरणको कोही विरोधी छैनन् । तर, त्यसभन्दा पहिला केही कुराहरू समझदारी त बन्नुप¥यो नि । त्यस्तो अहिलेसम्म ठोस निर्णय भइसकेको छैन, हामी पनि एकीकरण चाहन्छौं ।
० समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा भारत जानुभयो, तर फर्किनुभन्दा पहिला उहाँको मन्त्रालय नै परिवर्तन भइसकेको छ । प्रदेश प्रमुखहरू पनि परिवर्तन गर्दा उहाँलाई सोधिएन । भनेपछि, उहाँको सरकारमा सहभागितालाई तपाइँहरू कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ?
— यदि उहाँको सहमतिमा यी कुराहरू भएको छ, हामीले टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तर, सत्तारूढ दललाई नै बेवास्ता गरेर कुनै निर्णय गरिन्छ भने एकदम खेदजनक नै हो । उपप्रधानमन्त्री जस्तो ओहोदा भएका नेतालाई पनि सोधिँदैन भने ओलीको चरित्र स्पष्ट हुँदैछ । हामीले केपी ओलीलाई तानाशाहको उपजको रूपमा हेरिरहेका छौं । यस विषयमा समाजवादीका साथीहरूले तुरून्त सरकारबाट बाहिर आउनुपर्छ ।
० राजपा पनि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा भइरहेको छ, महन्थ ठाकुरलाई सभामुख बनाइने भन्ने हल्ला पनि छ नि ?
— महन्थ ठाकुरजी त यो देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख बन्ने हैसियत राख्नुहुन्छ । तर, राज्यले अप्ठ्यारो परेको बेलामा उहाँको नाम बाहिर ल्याउने गर्दछ । उहाँ सभामुख बन्ने हल्ला मात्र हो । महन्थ ठाकुरजी आत्मसमर्पण गरेर सभामुख पद लिनुहुन्न ।
० यथास्थितिमा उहाँ सभामुख बन्नुहुन्नु हुन्न ?
— निश्चितरूपमा यथास्थितिमा उहाँ अथवा हाम्रा नेता कुनै पदमा जाँदैन । राजपाको आफ्नो स्पष्ट धार, मूल्यमान्यता छ । जबसम्म हामीले उठाउँदै आएको माग पूरा हुने प्रक्रिया सुरू हुँदैन तबसम्म सरकारमा जाने कुरा कोरा कल्पना मात्र हो । हामीले कुनै पदका लागि मुद्दालाई छोडेर हिंड्न सक्दैनौं ।
० फेरि सीमा विवाद उचालिएको छ । यो समस्या समाधानका लागि सरकारको पहल कस्तो देख्नुहुन्छ ?
— नेपाल–भारत सीमा विवाद आजको होइन, तत्कालीन राजा महेन्द्रकै पालादेखिको हो । महेन्द्रले नै विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न सम्झौताहरू गरेका छन् । तराई–मधेश भेगमा सीमामा केही समस्याहरू छन् । ती आपसी समझदारीमा समाधान गर्न सकिन्छ । तर, जब–जब चुनाव आउँछ, त्यसपछि ठूलो राष्ट्रवादी देखाउन र जनतालाई झुक्याएर मत बटुल्ने हतियारको रूपमा मात्र यस्ता कुराहरू उठाइने गरिएको छ । सीमा विवादलाई कुटनीतिक तवरले समाधान गर्नुको साटो यो सरकारले जनतालाई भड्काउने अभिव्यक्तिहरू मात्र दिने गरेको छ । अहिले नेपालका सबै दलहरूको एकमत छ, तर यसमा सरकारको पहल देखिएको छ । अहिले उपनिर्वाचन आएको छ, यसलाई समाधान गर्नुको साटो यसलाई भोट बटुल्ने साधनको रूपमा प्रयोग गरिँदैछ । कुनै छिमेकी मित्रराष्ट्रको झण्डा जलाउने, दूतावास अगाडि नारा लगाउने जस्ता कार्यहरूले यो समस्या समाधान हुनेवाला छैन । यसका लागि कुटनीतिक पहल नै गर्नुपर्छ । राष्ट्रियताको नाममा छिमेकी मुलुकहरूसँग सम्बन्ध बिगार्ने काम यो सरकारले गरिरहेको छ । यस्तो राष्ट्रियता कहीं पनि छैन । राष्ट्रियताको लडाई त मधेशीले सधैं लड्दै आएका छन् ।